Kooxda Manchester United oo doonaysa saddex Weeraryahan oo ka ciyaara horyaalka Premier League - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Kooxda Manchester United oo doonaysa saddex Weeraryahan oo ka ciyaara horyaalka Premier League
Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay doonayso inay la soo saxiixato inta lagu guda jiro bishaan Janaayo weeraryahan cusub waxaana ay doonaysaa midkood saddex Weeraryahan oo ka ciyaara horyaalka Premier League.
Sida ay Warinayso The Telegraph, kooxda Manchesster United ayaa bartilmaameed ka dhiganaysa Weeraryahannada kala ah Jamie Vardy, Javier ‘Chicharito’ Hernandez iyo Alexis Sanchez waxaana ay rabtaa in midkood ay keeno Old Trafford inta lagu guda jiro bishaan.
Man United ayaa shalay Warbaahinta ciyaaruhu Wariyeen inay ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa xiddiga Arsenal ee Alexis Sanchez, waxaana ay rabtaa inay saxiixa xiddigan kaga adkaato kooxda haatan hoggaanka u haysa Premier League ee Manchester City.
Vardy ayaa la soo warinayaa inay ka dhigi doonto Man Utd kan ugu qaalisan, Red Devils ayaana rabta inay keensato weeraryahanka xawaaraha badan, iyadoo kooxda uu ka tirsan yahay ee Leicester City ay doonayso in la siiyo 35 milyan oo gini.
Dhinac kale Hernandez ayaa dib ugu soo laaban kara garoonka Old Trafford haddii kooxda West Ham loo celin karo 17 milyan oo gini ay ku qarashgareysay Weeraryahanka reer Mexico xagaagii la soo dhaafay.